Isikhwama se-Wholesale Energy isiphuzo Umkhiqizi Nomphakeli |Yingzhicai
1.Ukusukuma esikhwameni se-pocketable energy drink.
Isikhwama se-apula cider, isikhwama sesiphuzo samandla, isikhwama sejusi yezithelo, isikhwama soju.
Izinketho Zezinto ezibonakalayo
2Izendlalelo zezinto ezi-laminated: PET/LLDPE
3 Izendlalelo ze-laminated materials:
4Izendlalelo zezinto ezenziwe nge-laminated: PET/AL/PA/LLDPE,PET/AL/PA/RCPP
Imfundo yezinto ezibonakalayo
01 Ingabe ungumkhiqizi?
Impela, sesineminyaka engu-23 sikhiqiza izikhwama zokupakisha, sinamathisela ukubaluleka okukhulu ekulawuleni ikhwalithi enqubweni yethu yokukhiqiza.
02 Ingabe sidinga ukukhokhela imali yesilinda sokuphrinta?
Ngokokuqala ngqa, sidinga ukukhokhisa imali yesilinda sokuphrinta.Le mali isuselwa enanini lemibala yomkhiqizo, umshini wethu unemibala yokuphrinta engu-8, sidinga isilinda sokuphrinta esingu-8 kakhulukazi ukuze senze imikhiqizo, futhi uma inani le-oda lokuklama elifanayo ngonyaka lifinyelela inombolo ethile, sizobuyisela le mali ku- wena ngesimo sezikhwama.
03 Ungakwazi yini ukuhlinzeka ngomklamo?Ingabe sidinga ukukukhokhela izindleko zokuklama kwakho?
Sinethimba lochwepheshe lokuklama elihlinzeka ngomklamo wakho, inqobo nje uma usinika izinto ezifanele (njengezithombe ezithile) nomqondo womkhiqizo ohambisanayo, imiklamo yethu imahhala kumakhasimende, uma iklayenti elisha lisidinga sinikeze umklamo ohambisanayo, thina sizoqoqa inani elincane lemali yangaphambili yokuklama, futhi sizokhipha inani lentengo yempahla uma u-oda
04 Kungani ngikhetha izikhwama zokupakisha ku-yingzhicai?
I-1.Sineminyaka engu-23 ekukhiqizeni izikhwama zokupakisha futhi singagwema izinkinga eziningi ezingadingekile, singakwazi ukuqondisa ngokuphumelelayo inqubo yokukhiqiza nokulethwa ngesikhathi.
2.Sifake imishini yokukhipha izinto ngokuhambisana namazinga kazwelonke, siqinisekisa ukuphepha ekukhiqizeni futhi ngeke kumise ukukhiqizwa (ukuvikelwa kwemvelo kweChina kuqinile kakhulu)
3.Ifekthri yethu ifake ijeneretha yelanga, futhi ngeke ibambezeleke ukulethwa ngenxa yokuntuleka kukagesi (ihlobo liyinani eliphakeme kakhulu likagesi waseChina, futhi ukuze kuvikelwe ukusetshenziswa kukagesi kwezakhamuzi, kuzoba nomkhawulo ohambisanayo wokusetshenziswa kukagesi efektri)
Okwedlule: isikhwama isithelo shape
Olandelayo: esukuma isikhwama sebhodlela